Nepali Rajneeti | प्रधानमन्त्रीलाई गगनको चुनौती : तीन वर्षमा केके भए ?
प्रधानमन्त्रीलाई गगनको चुनौती : तीन वर्षमा केके भए ?
चैत्र २६, २०७७ बिहिबार ४७० पटक हेरिएको
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पछिल्लो तीन वर्षमा भएका विकास निमार्णका कामबारे संसदमा बहसका लागिका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीको कुरा नमिलेको र ठेकदारसँग मोलमोलाई भएका कारण सुरुङ छिचोलेपछि पनि पानी आउन साढे २ वर्ष लागेको र डेढ अर्ब अनावश्यक खर्च भएको उनको दाबी छ ।
कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘५७ दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलादेखि नै काम भएको थियो । ९ महिना त यो आयोजनामा सिन्को पनि भाँचिएन । अनि अहिले यत्रो फूर्ति ?’
२०४४ सालमा परिकल्पना गरिएको मेलम्ची आयोजना २०५५ सालमा विकास समिति बनेको स्मरण गर्दै उनले ७/८ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजनाका लागि २३ वर्ष लागेको बताए ।
यो अवधिमा सबै सरकारमा बसेको भन्दै कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘यो बेलामा प्रधानमन्त्री र हामी सबैले काठमाडौंबासीसामू पानी खुवाउन ढिला गर्‍यौं । तर यो आयोजानाबाट हामीले धेरै सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने बेलामा कहिले धारा खोलेर कहिले बाल्टिन थापेर तामासा गरेको छ । चमत्कार भयो भनेको छ ।’
२०६७ मा शुरु गरेको तथा २०७१ साल चैतसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण केही प्रभावित भएपनि २०७५/०७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने उनले बताए ।
अहिले बल्ल काम सकिन लागेको र वैशाखमा पहिलो युनिट सञ्चालनमा आउने भन्दै उनले यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको शैली दोहोर्‍याउने बताए । थापाले अघि भने, ‘गजबै भयो, प्रधानमन्त्रीले त विजुली बालिदिनुभयो, पानी झारिदिनुभयो भन्ने कविता अब हामीले फेरि सुन्नुपर्ने छ ।’
सरकारले चमत्कार गर्‍यो भन्नेहरुले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्यतु आयोजना, कर्णाली र कोशी करिडोरको विषयमा नबोलेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरु वर्षौदेखि थला परेको भन्दै उनले भने, ‘किनकी यसका संस्थागत आधारभूत समस्या छन् । मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ । यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ ।’